Esikwaziyo nge-COVID-19 Omicron: UMongameli uyacacisa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo » Esikwaziyo nge-COVID-19 Omicron: UMongameli uyacacisa
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
20 imiz efundwayo
Umongameli woMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa
Namhlanje kukhutshwe umbhalo kaMongameli Cyril Ramaphosa ethetha neSizwe soMzantsi Afrika malunga nenkqubela phambili kwiinzame zokunqanda ubhubhane we-COVID-19.
UMongameli weRiphabhliki yoMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa yintloko yombuso kunye nentloko karhulumente weRiphabhliki yoMzantsi Afrika. Umongameli ukhokela isebe elilawulayo likarhulumente kwaye uyinkomanda eyintloko yoMkhosi woKhuselo weSizwe waseMzantsi Afrika.
Namhlanje uye wahlaziya Abantu baseMzantsi Afrika kunye nehlabathi malunga nemeko evelayo kukwahluka kwe-Omicron ye-COVID-19.
Umongameli uCyril Ramaphosa uthi:
Kwangoko kule veki, izazinzulu zethu zichonge uhlobo olutsha lwe-coronavirus ebangela isifo se-COVID-19. Umbutho wezeMpilo weHlabathi uye wayibiza ngokuba yi-Omicron kwaye uyibhengeze 'njengeyantlukwano yenkxalabo'.
Ukwahluka kwe-Omicron kwaqala ukuchazwa eBotswana kwaye emva koko eMzantsi Afrika, kwaye izazinzulu ziye zachonga iimeko kumazwe afana neHong Kong, Australia, Belgium, Italy, United Kingdom, Germany, Austria, Denmark, and Israel.
Ukuchongwa kwangethuba kwalo mahluko kusisiphumo somsebenzi oncomekayo owenziwe zizazinzulu zethu eMzantsi Afrika kwaye sisiphumo esithe ngqo sotyalo-mali olwenziwa liSebe lethu leNzululwazi nokuTsha okutsha kunye nelezeMpilo kubuchule bethu bokucupha i-genomic.
Singamazwe ehlabathi athe aseka inethiwekhi yokucupha kwilizwe lonke ukusinceda ukuba sibeke iliso kwindlela yokuziphatha kwe-COVID-19.
Ukufunyaniswa kwangethuba kolu tshintsho kunye nomsebenzi osele ungene ekuqondeni iimpawu zayo kunye neziphumo ezinokwenzeka kuthetha ukuba sixhotyiswe ngcono ukuphendula ngokwahlukileyo.
Sinika imbeko kubo bonke oosonzululwazi bethu abadumileyo kwihlabathi nabahlonitshwa ngokubanzi kwaye babonakalise ukuba banolwazi olunzulu nge-epidemiology.
Kukho izinto ezininzi esele sizazi malunga nokwahluka ngenxa yomsebenzi owenziwe zizazinzulu zethu kucupho lwe-genome.
Okokuqala, ngoku siyazi ukuba i-Omicron inoguquko olungaphezulu kakhulu kunalo nakuphi na ukwahluka kwangaphambili.
Okwesibini, siyazi ukuba i-Omicron ibonwa ngokulula luvavanyo lwangoku lwe-COVID-19.
Oku kuthetha ukuba abantu ababonakalisa iimpawu ze-COVID-19 okanye abakhe badibana nomntu one-COVID-19, kusafuneka bavavanywe.
Okwesithathu, siyazi ukuba lo mahluko wahlukile kwezinye iinguqulelo ezijikelezayo kwaye awunxulumananga ngokuthe ngqo nokwahluka kweDelta okanye iBeta.
Okwesine, siyazi ukuba umahluko unoxanduva losulelo oluninzi olufunyenwe eGauteng kwezi veki zimbini zidlulileyo kwaye ngoku luyabonakala kuwo onke amanye amaphondo.
Kusekho izinto ezininzi malunga nalo mahluko esingawaziyo, kwaye izazinzulu zaseMzantsi Afrika nakwezinye iindawo zehlabathi kusenzima kakhulu ukuziseka.
Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo kunye neeveki, njengoko idatha eninzi ifumaneka, siya kuba nokuqonda ngcono:
nokuba i-Omicron idluliselwa ngokulula ngakumbi phakathi kwabantu,
nokuba iyawongeza umngcipheko wokosuleleka kwakhona,
ingaba ulwahlulo lubangela isifo esibi kakhulu, kwaye,
zisebenza kangakanani izitofu zangoku ngokuchasene ne-Omicron eyahlukileyo.
Ukuchongwa kwe-Omicron kungqamana nokunyuka ngequbuliso kosulelo lwe-COVID-19.
Oku kunyuka kugxile eGauteng, nangona iimeko zinyuka nakwamanye amaphondo.
Sibone umndilili wamatyala amatsha ali-1,600 kwiintsuku ezisi-7 ezidlulileyo, xa kuthelekiswa nama-500 amatyala amatsha emihla ngemihla kwiveki ephelileyo, kunye nama-275 eemeko ezintsha zemihla ngemihla kwiveki engaphambi koko.
Umyinge wovavanyo lwe-COVID-19 olune-COVID-2 lonyuke ukusuka malunga neepesenti ezi-9 ukuya kwi-XNUMX ekhulwini ngaphantsi kweveki.
Oku kunyuka okubukhali ngokugqithisileyo kusulelo ngexesha elifutshane.
Ukuba iimeko ziyaqhubeka nokunyuka, sinokulindela ukungena kumaza esine osulelo kwiiveki ezimbalwa ezizayo, ukuba kungekudala.
Oku akufanele kusimangalise.
Iingcali ze-Epidemiologists kunye neemodeli zezifo zisixelele ukuba kufuneka silindele igagasi lesine ekuqaleni kukaDisemba.
Oosonzululwazi nabo basixelele ukuba silindele ukuvela kwezinto ezintsha ezahlukeneyo.
Kukho iinkxalabo ezininzi malunga nokwahluka kwe-Omicron, kwaye asikaqiniseki ncam ukuba iya kuziphatha njani ukuya phambili.
Nangona kunjalo, sele sinezixhobo esizidingayo ukuze sizikhusele kuyo.
Sazi ngokwaneleyo malunga nokwahluka ukuze sazi into ekufuneka siyenzile ukunciphisa usulelo kunye nokuzikhusela kwizifo ezinzima nokufa.
Eyokuqala, esona sixhobo sinamandla, kugonyo.
Ukusukela oko kugonyo lokuqala lwe-COVID-19 lufumaneke ngasekupheleni konyaka ophelileyo, sibonile ukuba izitofu zokugonya ziye zanciphisa kakhulu kangakanani ukugula, ukulaliswa esibhedlele, kunye nokufa eMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela.
Izitofu zokugonya ziyasebenza. Izitofu zokugonya zisindisa ubomi!
Ukusukela oko sathi sasungula inkqubo yethu yogonyo lukawonke-wonke ngoMeyi 2021, ngaphezulu kwezigidi ezingama-25 zeedosi zokugonya sele zilawulwa eMzantsi Afrika.
Le yimpumelelo ephawulekayo.
Ukuza kuthi ga ngoku lelona ngenelelo lubanzi lwezempilo olwenziwe kweli lizwe ngexeshana nje elifutshane.
Amashumi amane ananye eepesenti abantu abadala abafumene idosi enye ubuncinane, kwaye i-35.6 yepesenti yabantu abadala baseMzantsi Afrika bagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19.
Ngokuphawulekayo, i-57 pesenti yabantu abaneminyaka engama-60 ubudala nangaphezulu bagonywe ngokupheleleyo, kwaye i-53 pesenti yabantu abaphakathi kweminyaka engama-50 kunye ne-60 bagonywe ngokupheleleyo.
Nangona le iyinkqubela yamkelekile, akwanelanga ukusenza ukuba sinciphise usulelo, sithintele ukugula nokufa kwaye sibuyisele uqoqosho lwethu.
Ugonyo oluchasene ne-COVID-19 lusimahla.
Ngokuhlwanje, ndingathanda ukuhlaba ikhwelo kuye wonke umntu ongagonywanga ukuba aye kwisikhululo sogonyo esikufutshane ngaphandle kokulibazisa.
Ukuba kukho umntu kusapho lwakho okanye phakathi kwezihlobo zakho ongagonywanga, ndiyakubiza ukuba ubakhuthaze ukuba baye kugonywa.
Ugonyo yeyona ndlela ibaluleke kakhulu yokuzikhusela wena kunye nabo bakungqongileyo ngokuchasene ne-Omicron variant, ukunciphisa impembelelo ye-wave yesine kunye nokunceda ukubuyisela inkululeko yoluntu sonke esiyilangazelelayo.
Ugonyo lukwabalulekile ekubuyiseleni uqoqosho lwethu lusebenze ngokuzeleyo, ekuqaliseni kwakhona uhambo, nasekubuyiseleni amacandelo asemngciphekweni afana nokhenketho kunye nokwamkela iindwendwe.
Uphuhliso lwezitofu zokugonya esinazo ngokuchasene ne-COVID-19 lwenziwe ukuba lubekho umbulelo kwizigidi zabantu abaqhelekileyo abathe bavolontiya ukuba bathathe inxaxheba kolu lingo ukuqhubela phambili ulwazi lwenzululwazi ukuze kuxhamle uluntu.
Ngabantu abathe bangqina ukuba ezi zitofu zikhuselekile kwaye ziyasebenza.
Aba bantu ngamagorha ethu.
Bazibandakanya nabasebenzi bokhathalelo lwempilo abebephambili kumlo ochasene nobhubhane iminyaka emibini evaliweyo, kwaye baqhubeka nokukhathalela abagulayo, abaqhubayo nokubonelela ngogonyo, nabaqhubeka nokusindisa ubomi.
Kufuneka sicinge ngabantu abaye bakhalipha xa sicinga ngokugonywa.
Ngokugonywa, asizikhuseli thina kuphela, kodwa sinciphisa uxinzelelo kwinkqubo yethu yokhathalelo lwempilo kunye nabasebenzi bethu bokhathalelo lwempilo kunye nokunciphisa iingozi ezijongene nabasebenzi bethu bezempilo.
UMzantsi Afrika, njengeqela lamanye amazwe, ujonge izitofu zokugonya ezonyusa abantu abasemngciphekweni omkhulu nabanokuthi i-booster ibe luncedo kubo.
Abasebenzi bokhathalelo lwezempilo kulingo lwaseSisonke, uninzi lwabo olwagonywa kwiinyanga ezingaphezu kwezintandathu ezidlulileyo, banikwa iidosi zokukhuthaza i-Johnson & Johnson.
I-Pfizer ifake isicelo kuGunyaziwe woLawulo lweeMveliso zezeMpilo eMzantsi Afrika ukuba ithamo lesithathu lilawulwe emva kothotho lweedosi ezimbini eziphambili.
IKomiti yabaPhathiswa yeeNgcebiso kuGonyo sele ibonisile ukuba iza kucebisa ukwaziswa okuseqongeni kwee-boosters eziqala ngabantu abadala.
Abanye abantu abane-immunodeficiency, njengabo bakunyango lomhlaza, i-renal dialysis, kunye nonyango lwe-steroids lwezifo ezizikhuselayo kumajoni omzimba, bavunyelwe iidosi ze-booster ngokwengcebiso yoogqirha babo.
Njengabantu ngabanye, njengeenkampani, nanjengorhulumente, sinoxanduva lokuqinisekisa ukuba bonke abantu beli lizwe bayakwazi ukusebenza, ukuhamba kunye nokuhlalisana ngokukhuselekileyo.
Ke ngoko besiqhuba uthethathethwano namahlakani ezentlalo kunye nabanye abachaphazelekayo ngokwazisa amanyathelo okwenza ugonyo lube ngumqathango wokufikelela kwiindawo zokusebenza, kwimisitho kawonke-wonke, izithuthi zikawonke-wonke, kunye neziseko zoluntu.
Oku kuquka iingxoxo ebeziqhubeka kwiNEDLAC phakathi kukarhulumente, abasebenzi, abezoshishino, kunye noluntu, apho kukho isivumelwano esibanzi ngemfuneko yamanyathelo anjalo.
Urhulumente useke igqiza eliza kwenza uthethwano olubanzi malunga nokwenza isinyanzelo sogonyo kwimisebenzi ethile kunye neendawo.
Igqiza elisebenzayo liza kunika ingxelo kwiKomiti yabaPhathiswa engoGonyo echotshelwe nguSekela Mongameli, eya kuthi yenze izindululo kwiKhabhinethi ngendlela enobulungisa nezinzileyo kwizigunyaziso zogonyo.
Siyaqonda ukuba ukuqaliswa kwamanyathelo anjalo ngumba onzima kwaye onzima, kodwa ukuba asiyijongi ngokunzulu kwaye njengento engxamisekileyo, siya kuqhubeka sisengozini kwiintlobo ezintsha kwaye siya kuqhubeka sihlupheka ngamaza amatsha okusuleleka.
Isixhobo sesibini ekufuneka silwe nolu tshintsho lutsha kukuqhubeka nokunxiba imaski yobuso ngalo lonke ixesha sikwindawo zikawonke-wonke kwaye sikunye nabantu abangaphandle kwemizi yethu.
Kukho ubungqina obuninzi bokuba ukunxiba ngokufanelekileyo kunye nokungaguquguqukiyo kwemaski yelaphu okanye esinye isigqubuthelo sobuso esifanelekileyo phezu kwempumlo kunye nomlomo yeyona ndlela ilungileyo yokuthintela usulelo lwentsholongwane ukusuka komnye umntu ukuya komnye.
Isixhobo sesithathu ekufuneka silwe nolunye uhlobo olutsha lolona lungabizi kakhulu kwaye luninzi kakhulu: umoya omtsha.
Oku kuthetha ukuba simele sizame kangangoko kunokwenzeka ukuba ngaphandle xa sidibana nabantu abangaphandle kwekhaya lethu.
Xa singaphakathi endlwini nabanye abantu, okanye ezimotweni, ezibhasini nakwiiteksi, kufuneka sivule iifestile ukuze siqinisekise ukuba umoya unokuhamba ngokukhululekileyo esithubeni.
Isixhobo sesine ekufuneka silwe umahluko omtsha kukuphepha iindibano, ngakumbi iindibano zangaphakathi.
Iindibano ezinkulu ezinje ngeenkomfa ezinkulu kunye neentlanganiso, ngakumbi ezo zifuna inani elikhulu labantu ukuba banxibelelane ngokusondeleyo ixesha elongeziweyo, kufuneka zitshintshelwe kwiifomathi ezibonakalayo.
Amatheko okuphela konyaka kunye neminyhadala yokuphela konyaka yematriki kunye neminye imibhiyozo kufuneka ihlehliswe, kwaye wonke umntu makacinge kabini phambi kokuba aye okanye aququzelele indibano.
Apho kuqhutywa khona iindibano, zonke iiprothokholi eziyimfuneko ze-COVID kufuneka ziqwalaselwe ngononophelo.
Lonke unxibelelwano olongezelelekileyo esinalo kwandisa umngcipheko wokosuleleka okanye ukosulela omnye umntu.
I-National Coronavirus Command Council idibene izolo ukujonga ukunyuka kwamva nje kosulelo kunye nefuthe elinokubakho lokwahluka kwe-Omicron.
Oku kulandelwe ziintlanganiso zangaphambili namhlanje zeBhunga likaMongameli lokuLungelelanisa kunye neKhabhinethi, apho kuthatyathwe isigqibo sokuba ilizwe lihlale likwiNqanaba loku-1 loLumkiso lweCoronavirus okwangoku kwaye iLizwe leSizwe leNtlekele kufuneka lihlale likhona.
Ekuthatheni isigqibo sokunganyanzeli ezinye izithintelo kweli nqanaba, sithathele ingqalelo into yokuba xa sidibana namaza osulelo lwangaphambili, izitofu zokugonya bezingekho ngokubanzi, kwaye bambalwa kakhulu abantu abaye bagonywa.
Ayisenjalo. Amayeza okugonya ayafumaneka kuye nabani na oneminyaka eli-12 nangaphezulu, simahla, kumawaka eendawo kwilizwe liphela.
Siyazi ukuba banqanda izifo ezinzima kunye nokulaliswa esibhedlele.
Siyazi kwakhona ukuba i-coronavirus iya kuba nathi ixesha elide. Ke ngoko kufuneka sifumane iindlela zokulawula ubhubhane ngelixa sinciphisa ukuphazamiseka kuqoqosho kunye nokuqinisekisa ukuqhubeka.
Nangona kunjalo, le ndlela ayizi kugcinwa ukuba asinyusi izinga lokugonywa, ukuba asizinxibi iimaski, okanye ukuba asiphumeleli ukuthobela imiqathango yezempilo esisiseko.
Sonke kufuneka sikhumbule ukuba ngokwemigaqo yeNqanaba loku-1 lesiLumkiso:
Kusekho ixesha lokubuya ekhaya ukusuka ngentsimbi yeshumi elinesibini ezinzulwini zobusuku ukuya kwintsimbi yesine kusasa.
Akukho bantu bangaphezulu kwama-750 abanokuhlanganisana ezindlini kwaye bangabi ngaphezu kwama-2,000 abantu abanokuhlanganisana ngaphandle.
Apho indawo incinci kakhulu ukuba ingamela la manani ngokumiswa okufanelekileyo koluntu, akusayi kusetyenziswa ngaphezulu kwe-50 yepesenti yendawo.
Akukho bantu bangaphezulu kwe-100 abavunyelweyo emngcwabeni, kwaye imilindo yasebusuku, iindibano zasemva komngcwabo, kwaye 'iindibano ezisemva kweenyembezi azivumelekanga.
Ukunxiba iimaski kwiindawo zikawonke-wonke kusesisinyanzelo, kwaye ukusilela ukunxiba imaski xa kuyimfuneko kuhlala kulityala.
Ukuthengiswa kotywala kuvunyelwe ngokwemiqathango yelayisenisi eqhelekileyo, kodwa akunakuthengiswa ngexesha lexesha lokubuya ekhaya.
Siza kubeka iliso elibukhali kumazinga osulelo kunye nokulaliswa esibhedlele kwezi ntsuku zizayo kwaye siya kuphonononga imeko kwenye iveki.
Emva koko kuya kufuneka sinqume ukuba amanyathelo akhoyo afanelekile okanye ngaba utshintsho kufuneka lwenziwe kwimimiselo yangoku.
Siqalise inkqubo yokulungisa imimiselo yethu yezempilo ukuze sikwazi ukuphonononga ukusetyenziswa koMthetho woLawulo lweNtlekele ukulawula indlela esisabela ngayo kulo bhubhani, ngeenjongo zokuthi ekugqibeleni siphelise iSizwe seNtlekele.
Siza kuphumeza isicwangciso sethu sesizwe sokuvuselela ukuqinisekisa ukuba izibhedlele kunye namanye amaziko onyango alungele iliza lesine.
Sijolise kulawulo olusebenzayo lweklinikhi, ukulandelwa koqhagamshelwano kunye nokuhlolwa, ukhathalelo lweklinikhi olusebenzayo, ukufumaneka kwabasebenzi bezempilo.
Ukuqinisekisa ukuba amaziko ethu alungile, zonke iibhedi zesibhedlele ebezifumaneka okanye bezifuneka ngexesha lesithathu le-COVID-19 zicwangcisiwe kwaye zilungiselelwa iliza lesine.
Sikwasebenzela ukuqinisekisa ukuba ubonelelo lweoksijini luyafumaneka kuzo zonke iibhedi ezibekelwe ukhathalelo lwe-COVID-19.
Siza kuqhubeka nokukhokelwa nguMbutho wezeMpilo weHlabathi kuhambo lwamazwe ngamazwe, olucebisa ngokuchasene nokuvalwa kwemida.
Njengamanye amazwe amaninzi, sele sineendlela zokulawula ukungeniswa kwezinto ezahlukeneyo kwamanye amazwe.
Oku kuquka imfuneko yokuba abahambi bavelise isatifikethi sokugonya kunye novavanyo lwe-PCR olunegative oluthathwe kwiiyure ezingama-72 zohambo, kunye nokuba iimaski zinxitywe ngexesha lokuhamba.
Sidane kakhulu sisigqibo samazwe aliqela sokuthintela uhambo olusuka kwinani lamazwe akuMazantsi e-Afrika kulandela ukuchongwa kwe-Omicron eyahlukileyo.
Oku kukumka okucacileyo nokungekho sikweni ngokupheleleyo kwisibophelelo okwenziwa uninzi lwala mazwe kwintlanganiso yamazwe e-G20 eRome kwinyanga ephelileyo.
Baye bathembisa kuloo ntlanganiso ukuqalisa kwakhona uhambo lwamazwe ngamazwe ngendlela ekhuselekileyo nenocwangco, ngokuhambelana nomsebenzi wemibutho yamazwe ngamazwe echaphazelekayo efana noMbutho wezeMpilo weHlabathi, i-International Civil Aviation Organisation, i-International Maritime Organization, kunye ne-OECD.
IsiBhengezo saseRome se-G20 siqaphele ingxaki yecandelo lezokhenketho kumazwe asaphuhlayo, saza sazibophelela ekuxhaseni “ukubuyisela ngokukhawuleza, okomelela, okubandakanyayo nokuzinzileyo kwecandelo lezokhenketho”.
Amazwe abeke izithintelo zokuhamba kwilizwe lethu kunye namanye amazwe ethu akuMazantsi e-Afrika abandakanya i-United Kingdom, i-United States, amalungu e-European Union, iCanada, iTurkey, iSri Lanka, i-Oman, i-United Arab Emirates, i-Australia, iJapan, iThailand, iSeychelles. , eBrazil, naseGuatemala, phakathi kwezinye.
Ezi zithintelo azinasihlahla kwaye zicalula ngokungafanelekanga ilizwe lethu kunye namazwe angoodade wethu akuMazantsi e-Afrika.
Ukuthintelwa kokuhamba akwenziwanga yisayensi, kwaye akuyi kusebenza ekuthinteleni ukusasazeka kwale mahluko.
Ekuphela kwento isithintelo sokuhamba esiya kuyenza kukonakalisa ngakumbi uqoqosho lwamazwe achaphazelekayo kwaye sijongele phantsi amandla awo okuphendula, kunye nokuchacha kubhubhane.
Sihlaba ikhwelo kuwo onke loo mazwe amisele imiqathango yokuhambahamba kwilizwe lethu nakumazwe angoodade wethu akuMazantsi e-Afrika ukuba ajike ngokukhawuleza izigqibo zawo aze aphelise isithintelo abesibekile phambi kokuba kwenziwe nawuphi na umonakalo kuqoqosho lwethu nakwimpilo yabantu bethu.
Akukho sizathu senzululwazi sokugcina le miqobo isendaweni.
Siyazi ukuba le ntsholongwane, njengazo zonke iintsholongwane, iyatshintsha kwaye yenze iindidi ezintsha.
Siyazi kwakhona ukuba amathuba okuvela kweentlobo ezinzima zokwahluka ayanda kakhulu apho abantu bangogonywanga.
Yiyo loo nto sijoyine amazwe amaninzi, imibutho, kunye nabantu kwihlabathi liphela ebebelwela ukufikelela ngokulinganayo kwizitofu zokugonya kuye wonke umntu.
Sithe ukungalingani kwesitofu sokugonya akuhlawulisi ubomi kuphela kunye nokuphila kula mazwe anqatshelwe ukufikelela kodwa ikwasongela iinzame zehlabathi zokoyisa ubhubhane.
Ukuvela kokwahluka kwe-Omicron kufuneka kube lukhwelo lokuvusa ihlabathi ukuba ukungalingani kwesitofu sokugonya akunakuvunyelwa kuqhubeke.
De wonke umntu agonywe, wonke umntu uya kuba semngciphekweni.
De wonke umntu agonywe, kufuneka silindele ukuba iintlobo ezininzi ziya kuvela.
Ezi zantlukwano zinokosulela ngakumbi, zinokubangela isifo esiqatha, kwaye mhlawumbi zikwazi ukumelana nogonyo lwangoku.
Endaweni yokuthintela ukuhamba, amazwe atyebileyo ehlabathi kufuneka axhase iinzame zoqoqosho oluphuhlayo ukufikelela kunye nokwenza iidosi zokugonya ezaneleyo zabantu bawo ngaphandle kokulibazisa.
Ukuvela kokwahluka kwe-Omicron kunye nokunyuka kwamatyala akutsha nje kuye kwacaca ukuba kuya kufuneka siphile nale ntsholongwane ixesha elithile elizayo.
Sinolwazi, sinamava kwaye sinezixhobo zokulawula lo bhubhani, ukuqalisa kwakhona uninzi lwemisebenzi yethu yemihla ngemihla, kunye nokuvuselela uqoqosho lwethu.
Sinako ukumisela indlela ilizwe lethu eliza kuyithatha.
Ngamnye wethu kufuneka agonywe.
Ngamnye wethu kufuneka aziqhelanise nemigaqo yezempilo esisiseko njengokunxiba iimaski, ukuhlamba okanye ukucoca izandla rhoqo, kunye nokuphepha iindawo ezixineneyo nezivaliweyo.
Ngamnye wethu kufuneka athathe uxanduva ngempilo yakhe kunye nempilo yabo basingqongileyo.
Ngamnye wethu unendima ekufuneka eyidlalile.
Asiyi koyiswa ngulo bhubhani.
Sele siqalile ukufunda ukuphila nayo.
Siya kunyamezela, siya koyisa kwaye siya kuphumelela.
UThixo sikelela uMzantsi Afrika kwaye ukhusele abantu bawo.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi kwaye i IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika ibifuna ukusasazwa ngokulinganayo kweGonyo kunye notshintsho lokuqinisekisa ukuhamba ngenqwelomoya okukhuselekileyo kunye ne-COVID019
I-WTN Ibiza iSigunyaziso seHlabathi sokugonya kunye noSabelo oluLinganayo
Izikhokelo ze-WTN: UngaHamba njani nge-Omicron entsha ye-Covid?